Banky Afrikanina ho an’ny Fampandrosoana : Hahazo fanampiana hatrany amin’ny 1 miliara Dolara i Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaBanky Afrikanina ho an’ny Fampandrosoana : Hahazo fanampiana hatrany amin’ny 1 miliara Dolara i Madagasikara
Vola mitentina hatrany amin’ny 1 miliara Dolara no efa fantatra fa homen’ny banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana na ny BAD hanampiana an’i Madagasikara mandritra ny taona 2017 hatramin’ny 2021, ary hiompana amin’ ny fanatsarana ny sehatry ny fambolena sy ny angovo ny fampiasana ireo vola ireo. Io no anisan’ny nivoitra nandritra ny fihaonan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny filohan’ny BAD, Akinwumi Adesini, tao amin’ny foiben’ny banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana ao Cee Institution ao Abidjan, omaly. Araka ny voasoritra ihany koa nandritra ny fandalovan’ny filohan’ny BAD taty Madagasikara ny volana aogositra 2016, dia efa an-dalana ny fanatanterahana ireo vinavinana tetikasa goavana. Voalohany amin’ izany ny tetikasa goavana izay hotanterahina manodidina ny faritra avaratry ny Nosy rehetra, izay tafiditra anatin’ny ‘’Fonds d’investissement Africa 50 ’’ , natokana ho an’ny famatsiana tetikasa miompana amin’ny fotodrafitrasa. Ny Famatsiana manaraka dia fanamboarana fotodrafitrasa lehibe amin’ny famatsiana herinaratra ‘’Barrage hydroéléctrique’’ao sahofa, mba hahafahana mampiakatra ny tahan’ny famatsiana herinaratra ho an’ ny mponina, indrindra ireo any ambanivohitra. Noho ireo voalaza rehetra ireo dia hihamafy hatrany ny fiaraha-miasan’ ny banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana sy i Madagasikara.
Mikasika ity famatsiam-bola avy amin’ny banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana ity ihany dia miisa valo ireo tetikasa izay efa mandeha ankehitriny ary mitentina hatrany amin’ny 260 tapitrisa Dolara ny famatsiana ara-bola efa voahomana amin’ izany, anisan’izany ny fanitarana ny valan’i Bas Mangoky . Ho an’i Madagasikara sy ny BAD dia efa fotoanan’ny vokatra haingana feno kalitao izao izay misy vokany miabo mankany amin’ny vahoaka malagasy, indrindra ireo tantsaha. Nandritra ny fihaonan’ ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny filohan’ny BAD dia niarahaba manokana an’i Akinwumi Adesini, filohan’ny BAD, ny Filoha malagasy, noho ny fihatsarana hatrany ny fiaraha-miasan’ny roa tonta, satria dia miompana amin’ny fanohanana mivantana amin’ny politikan’ny fampandrosoana izany. Nilaza ihany koa ny Filoha malagasy fa ‘’efa mandeha foana ny famoaham-bola na ny décaissement ary tsy misy atahorana ny fiaraha-miasa amin’ny BAD, anisan’izany ny famoaham-bola hanamboarana ny lalam-pirenena faha-9 mampitohy an’i Toliara sy Bas Mangoky’’. Mitohy sy mihatsara hatrany, noho izany, ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta ka hatrany amin’ny taona 1977 dia efa hitentina ho 2 miliara Dolara ny vola izay efa novatsian’ny BAD an’ i Madagasikara.
Taorian’ny fanambaran’ny filohan’ny antenimieran-doholona teo, Honoré Rakotomanana, izay filoha teo aloha, ny amin’ny tsy fahefany intsony hanatanteraka ny andraikitra ny maha lehiben’ ity andrim-panjakana ity intsony azy, dia nanapa-kevitra avy hatrany ireo mpikambana eo anivon’ ...Tohiny